Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay la tirtiro ama weelna Trash on Mac OS X
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Trash madhiyey Mac OS X
Maxaa dhacay haddii aan go'aansanno in aan Trash madhan Bin?
Marka aynu ka shubeen Trash Bin (udhigto ammaan kuma jirto), waxa aan dhab ahaantii waa la tirtiray ma faylka. Kaliya in aad lumiso helitaanka ee file ka nidaamka. Goobta degan files tirtiray waxa lagu calaamadiyaa sida "heli karo si isticmaalin", si faylasha tirtiray sii awood ku wadid ilaa ay overwritten by files kale. Files ayaa la kaliya tirtirayaa marka ay overwritten by files cusub. Si looga hortago overwriting waxaan u baahan nahay in ay joojiyaan isticmaalka Mac isla markiiba haddii aan rabno in aan soo kabsado xogta tirtiray ka Trash Mac.
Sidee inuu ka soo kabsado files tirtiray ka Trash Mac
Si tirtireyso Trash madhiyey Mac OS, waxaad isku dayi kartaa barnaamijka dhaqancelin ah - Mac-kabashada Trash. Halkan waxaan ku talinaynaa in si Khashuue ah Wondershare Data Recovery for Mac , soo kabashada ah xogta u fududahay in la isticmaalo dadka isticmaala Mac, taas oo la jaan qaada Mac OS X Mavericks. Iyada oo ay interface saaxiibtinimo, waxaad soo kaban karto, qashinka Mac kaliya qasabno qaar ka mid ah. Haddii meel bannaan oo aan la overwritten, faylasha aad tirtiray la soo kabsaday karaa 100%.
Maxaad Wondershare Data Recovery for Mac
Kabsado xogta aad laga badiyay ilaa 550+ noocyada file badiyay hoos xaaladaha kala duwan!
Ceshano xogta laga badiyay ay sabab u tahay qaabka, tirtirka iyo gaarid.
Kabsado noocyada kala duwan ee faylka sida sawirada, archives, waraaqaha, songs, videos, iwm
Kuu ogolaanaya in aad si aad u badbaadiso xogta ka Macbook, iPod, desktop Mac, drives USB, kaamirooyinka digital, telefoonada gacanta iyo warbaahinta kale lagu kaydiyo.
Kaliya akhriska iyo soo kabsado xogta, wax yaabaha lahayn, bedelayaan ama waxyaabo la mid ah, 100% ammaan ah.
Maskaxda ku hay: Marna dejisan iyo rakibi barnaamij kasta ee meesha aad ku badiyay faylasha aad, waayo, kanu overwrite yaabaa xogta aad laga badiyay. Download oo ku xidh on xijaab kale.
Talaabooyinka ee soo kabashada Trash on Mac
Tallaabada 1 Dooro hab Recovery Khasaaray File
"Lumay Recovery File" undelete karo files ka xijaab ama warbaahinta saari karo, iyadoo aan loo eegayn tirtiray amarka + Delete ama weelna qashinka.
Doorasho soo kabashada waxa lagula talinayaa marka hore, maxaa yeelay, waxay aad qaataa dhowr daqiiqo si ay u soo ceshano files tirtiray ka Trash Mac. Haddii aad u heli kari tirtiray file in hab this, waxaad isku dayi kartaa "ceeriin Recovery" ka dib, taas oo soo kaban karto, tan oo files ay ku jiraan kuwa laga badiyay muddo dheer ka hor, waqti dheeraad ah oo wada baabbi'iyey sida.
Tallaabada 2 Sawirka goobta qashinka ku Mac
Dooro drive ay macquul ah meesha aad tirtiray faylasha aad, haddii aad leedahay wax ka badan hal drives on your Mac. Markaas riix "Scan" si ay u baadhaan faylasha aad tirtiray.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan files ka Trash Mac
Waxaad halkan hadda jira. Marka gool scan ah, dhammaan faylasha aad tirtiray ku qoran yihiin wadadii asalka ah, oo aad wax si toos ah iyaga tirtiray ka Library, desktop, ama Trash, iwm sugan, faylasha aad weelna Trash waa in "Trash" folder. Ama waxaad ka raadin kartaa magaca file ee bar raadinta dusheeda lagu soo saaro si degdeg ah.
Ka hor inta soo kabashada, waxaad ku eegaan kartaa file si loo hubiyo in files ama tiro. Image Common qaabab, waraaqaha iyo archives waxaa loo ogol yahay in ay si toos ah ku eegaan.
Tallaabada 4 Save the files soo kabsaday on xijaab kale ama disk
Marka hubinaya faylka u soo kabashada, guji "Ladnaansho" si ay u soo ceshano. Waxa aad u sii waa in ay maanka waa: ma badbaadin faylasha kabsaday ku meel ka mid ah halkaas oo aad iyaga laga badiyay, haddii aad iyaga overwrite. Haddii aadan heli dhan faylasha, faylasha tirtiray la overwritten doonaan kaydinta aad files cusub '.
Talooyin: Ka hor inta "Trash faaruqa ah", fadlan hubi qashinka Bin si taxadar leh. Haddii aad hesho wax qiimo leh, aad tilmaami karo kuwa helay si qalad ah waxaa soo diray oo iyaga ka soo bixiyo Trash si looga fogaado madax khasaaro macluumaadka.
Baro Top 8 Yosemite Qarsoon Talooyin in Noqo Mac Geek
Apple khudbad u Mac
> Resource > Mac > Guide Ultimate inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Trash madhiyey Mac OS X